Kulamo kala gaar gaar ah oo xalay Muqdisho ka dhacay – ASM Raage
Kulamo kala gaar gaar ah oo xalay Muqdisho ka dhacay
Posted byabdullahi87 May 23, 2021 May 23, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa waxa ay la kulmeen Siyaasiyiinta gobolada Waqooyiga oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Mahdi Guuleed, kulankan ayaa looga hadlay xalinta tabashooyinka ka jira kuraasta Somaliland iyo sidii labada dhinac ugu heshiin lahaayeen Guddiga doorashada.
Is fahamkii Baydhabo ka dhacay 16 Febraayo ayaa la isla gartay in xubnaha guddiga doorashada Somaliland ay kala qeybsadaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed.
Dhinaca kale waxaa xalay kulmay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofurgalbeed Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen iyo Xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta, iyagoo ka wada hadlay xal u helida arrimaha doorashooyinka iyo sidii Midowga Musharaxiinta ay u taageeri lahaa shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Mustaf Dhuxulow iyo xubno kale oo ka tirsan Musharaxiinta, waxaana goobjoog ka ahaa Wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed.
Meydka Ganacsade Soomaali ah oo todobaaddo la la’aa oo meydkiisii la helay
Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay in si dhaqso ah heshiis looga gaaro Doorashooyinka dalka